Cambridge University: Brain Scan ဆေးသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်ကိုက်ညီသောအထောက်အထား - Your Brain On Porn
UPDATE: ၎င်း၏ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က: ဦးနှောက် Scan ဖတ် porn စွဲကိုရှာဖွေ.
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအတွက် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြပြီးထိုကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်မရှိသူများတွင်မဖြစ်ပေါ်ပါ
ညစ်ညမ်းစွဲနေသောပြည်သူ့လေ့လာမှုတစ်ခုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်, အရက်သမားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲအလားတူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပြသပါ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု compulsive ဝန်ခံသူကိုစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ၏ MRI Scan ဖတ်ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစင်တာများတစ်ဦးအချိုရည်ကြော်ငြာကိုမြင်လျှင်တခုတခုအပေါ်မှာအရက်ရဲ့တန်ခိုးကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းကိုမြင်လျှင်မှတုံ့ပြန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကအဆိုပါသုတေသနလုပ်ငန်းကိုသူတို့ compulsive အသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်ကြဟုဆိုသည်သူတွေကိုတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုသည်ဆန့်ကျင် 19 စွဲလမ်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်။
ခဲသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ Valerie Voonတစ်ဦးဂုဏ်ထူးဆောင်အတိုင်ပင်ခံ neuropsychiatrist သည်တနင်္ဂနွေ Times သတင်းစာကိုပြောသည်: "ကျနော်တို့ကဦးနှောက်၏ဧရိယာ၌ သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အပျော်အပါးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဆုလာဘ်စင်တာ, သော ventral striatum ခေါ်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးအရက်သောက်ဘို့ကြော်ငြာကိုမြင်သည့်အခါ ", သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟာအခြို့သောလမ်းအတွက်တက်ပွင့်လင်းမည်သူတို့တစ်တွေအခြို့သောလမ်းအတွက်နှိုးဆွပေးလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်လှုပ်ရှားမှု၏ဤတူညီသောမျိုးကိုမြင်လျှင်နေကြတယ်။ "
အဆိုပါလေ့လာမှုကိုထုတ်ဝေခံရဖို့သေးသောဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မှာထုတ်လွှင့သောဦးနှောက်အပေါ် Porn ဟုခေါ်သော Channel ကို4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက်မည်ဖြစ်သည် တနင်္လာနေ့ 10 စက်တင်ဘာလအပေါ် 30pm။ [သငျဖို့ကွိုးစားနိုင်ပါတယ် ဒီမှာစောင့်ကြည့် - သတိပြုပါ၊ ၎င်းတွင်ဂရပ်ဖစ်မြင်ကွင်းအနည်းငယ်ပါရှိသည်]
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မကြာသေးမီကအတည်မပြုရသေးသောအတည်မပြုနိုင်သောအစီရင်ခံစာများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆေးစွဲမှုနှင့်မတူညီကြောင်းတွေ့ရှိချက်များအရ David Cameron ၏အချို့သောညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုရန်အဆိုပြုချက်များကိုထောက်ခံသည့်အငြင်းပွားမှုအဖြစ်ရှုမြင်လိမ့်မည်။ ……
ဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ ညစ်ညမ်းစွဲရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအတူတူပင်ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုဦးဆောင်
Channel4မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ကင်းဘရစ်လေ့လာမှုတွင်ဤဆောင်းပါးအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း - ဒီပုံမှာဘာမှားနေသလဲ။ -Norman Doidge, MD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချစေသောစမ်းသပ်မှုသည်ယနေ့ကလေးများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောအန္တရာယ်အရှိဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည် - ယောက်ျားဟောင်းများမှမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ Martin Daubney က
Sunday Times (UK) - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှင့်ကင်းဘရစ် Porn သုတေသန
လေ့လာမှု - ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည် 'အလွန်အမင်း' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းလျှောက်ပြီးကူညီလိုကြသည်
ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုအကဲဖြတ်ပြီးရလဒ်များကိုထိန်းချုပ်သည့်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကြည့်ရှုနေပါကညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏“ ဆုလာဘ်စင်တာ” သည်ထွန်းလင်းတောက်ပနေသည်။ အဘယ်အရာကဤကဲ့သို့သောကောင်းစွာဒီဇိုင်းလေ့လာမှုကိုဖြစ်စေသနည်း
Cambridge သည် MRI (ဦး နှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု) ကိုအကျိုးရှိသည့်“ စင်တာ” (nucleus accumbens) ၏အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ 19 စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များအားလုံးလိင်ကွဲအထီးအသက်အရွယ် 19-34 (သိပ္ပံ-ပွောအတွက်တသားတည်း) တို့ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ 19 porn စွဲအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်ကူထီးနှင့်ဒုက္ခ porn အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု 19 တစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုအလားတူအသက်အရွယ်မရွေးယောက်ျားလိုက်ဖက်အလုပ်။
“ ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများ” နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုတူညီသော fetish porn မဟုတ်ဘဲ“ cue” လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ provocative dancing ကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု) ကိုပြသည်။
“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ညစ်ညမ်းစွဲသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မတူကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အထက်ပါလေ့လာမှုသူမ၏အတွက် UCLA ရဲ့ sexologist နေဖြင့်မကြာသေးမီကလုပ်တောင်းဆိုမှုများနှင့် Kinsey Institute မှဘွဲ့ရနီကိုးလ် Prause ဆန့်ကျင် မီဒီယာ blitz based တစ်ဦးအပေါ် ညံ့ဖျင်းဒီဇိုင်း, လှညျ့စားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှု (ဇူလိုင်လ 2013) ။ ဤရွေ့ကားမတူညီသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ဤလေ့လာမှုနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ကင်းဘရစ်လေ့လာမှုသည်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းများစွာနှင့်အတူနည်းစနစ်များနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများတွင်တသမတ်တည်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, ချီးမွမ်းခြင်းလေ့လာမှု တစ်ဦးကလက်ခံပြောဆိုချက်ကိုစေသည် လိင်စွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု) သည်အမှန်တကယ်သာလိင်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းသာဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Prause နှင့်ကင်းဘရစ်လေ့လာမှုများနှိုငျးယှဉျမီ, ဒါဟာ (ထို Prause လေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား arousal တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထောက်ပြရမည်ဖြစ်သည်EEG ဖတ်ဘာသာရပ်များခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါ) ။ ဒီမှာအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပါ မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ arousal ဖြစ်လေသည်။ မှ ဒီစိတ်ပညာယနေ့တွင်အင်တာဗျူး:
Prause: "ဤတွေ့ရှိချက်များကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူတို့၏ ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ရုပ်ပုံများကိုမတုန့်ပြန်ကြောင်းပြသခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တရားမှာ EEG ဖတ် (P300) ခဲ့ကြ ပိုမိုမြင့်မား ကြားနေပုံရိပ်တွေသည်ထက်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များသည်။ ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များအဘို့အမြင့်မား EEG ဖတ်ဘို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုအတိအကျကဘာလဲ မည်သည့် ကြည့်ရှုသူသည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်လာသကဲ့သို့ (စွဲလမ်းနေသည့်အက်ကြောင်းစွဲပုံပိုက်တစ်ခု၏ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့) စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အတွက်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကို -သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်စွဲသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအခြားစွဲကဲ့သို့ပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး"- ရိုးရိုးလေးမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါစိတ်ပညာယနေ့တွင်အင်တာဗျူးအောက်မှာမှတ်ချက်, စိတ်ပညာပါမောက္ခ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင် said:
Prause မှကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင်မြုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်သည်သူတို့၏မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတုန့်ပြန်သကဲ့သို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုတုန့်ပြန်မှုမပြုခဲ့ဟုသူမကလိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအတွက် P300 ဖတ်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ P300 spikes များကိုပြသသောဆေးစွဲသူများကဲ့သို့ပင်သူတို့ရွေးချယ်သောဆေးနှင့်ပြသသောအခါ။ အမှန်တကယ်ရလဒ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကောက်ချက်ကိုသူမည်သို့ကောက်ယူနိုင်မည်နည်း။ သူမတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့်သူမ၏ကြိုတင်အမြင်များကိုသူလုပ်နိုင်သည်ဟုထင်သည်။
ဤသည် Prause သူမ၏ရလဒ်များကိုပတ်ချာလည်ကိုဘယ်လိုဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်။ သင်ဒီမှာသူမ၏လေ့လာမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုဖတ်ရှုနိုင်သည် SPAN Lab မှ Porn လေ့လာမှုအသစ် (၂၀၁၃) တွင်အဘယ်အရာမျှမရှိပါ။ Prause သူမ၏လေ့လာမှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဖြင့်ပုံတူကူးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပြောကြား။
Prause- အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကိုပုံတူကူးယူပါကဤတွေ့ရှိချက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာသီအိုရီများကိုအဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။"
Prause ရဲရင့်စွာဤလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သူမ၏တွေ့ရှိချက်များသည်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းခြင်းသဘောတရားကိုဖုံးကွယ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Prause သည်သူမသံသယရှိသောတွေ့ရှိချက်များကိုဆက်လက်ပုံတူပွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သော်လည်းမှားယွင်းသောလေ့လာမှုကိုပုံတူပွားခြင်းသည် ပို၍ မှားယွင်းသောလေ့လာမှုများနှင့်ညီမျှသည်။
အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုနှင့်အတူ Prause လေ့လာမှု၏နှိုင်းယှဉ်:
Prause ၏တစ်ခုတည်းသောတရားဝင်ပြောဆိုချက်မှာသူမတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် အဘယ်သူမျှမဆက်စပ် အဓိကအားမေးခွန်းလွှာရမှတ် (အများအကြား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး) နှင့် EEG ဖတ် (P300) ။ သူမမျှဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဖြေရှင်း ဒီမှာ.
1) အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှု cue တုံ့ပြန်မှု dopamine spikes ၏ပုံစံဖြစ်ပေါ်ရှိရာဆုလာဘ်စင်တာ (ventral striatum) ၏လှုပ်ရှားမှု, အကဲဖြတ်ရန်ဦးနှောက် Scan ဖတ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကောင်းစွာတည်တတ်၏နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အခြားစွဲလေ့လာမှုများများစွာအတွက်အသုံးချခဲ့သည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Prause သည် EEGs များကိုတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက် cortex ၏လျှပ်စစ်လုပ်ဆောင်မှုကိုသာအကဲဖြတ်။ ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ EEGs များသည် arousal state များကိုသာပြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်မြင့်မားသော EEG ဖတ်ခြင်း (P300) သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းတို့ကြောင့်လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ“ နှိုးဆွခြင်း” ဖြစ်နိုင်သည်။
2) porn စွဲအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်သူကိုနုပျို, လိင်ကွဲအထီး: အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုဘာသာရပ်တစ်ခုတသားတည်းအုပ်စုကိုအလုပ်။
Prause ၏ဘာသာရပ်များသည်အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ကွဲဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသော်လည်းသူမ၏အဖွဲ့သည်၎င်းတို့အားစံပြ၊ စိတ်မ ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးသား + အမျိုးသမီး porn ကိုပြသခဲ့သည်။ လိင်တူချစ်သူကိုလိင်တူသူကိုသူမကဲ့သို့ပြသနိုင်ပြီးရလဒ်ကောင်းများကိုမျှော်လင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုကင်း၏ cue- သွေးဆောင်ဓာတ်ပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသောယောက်ျားများ၊ မိန်းမများနှင့်လိင်တူချစ်သူများနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုကိုနှိုးဆွသောတိုင်းတာသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဤတစ်ခုတည်းဆက်စပ်မှု၏မရှိခြင်းကိုရှင်းပြသည်။ ဥပမာအားကြည့်ပါ။ လိင်စိတ်နိုးထနှင့် Erotica မှထိခိုက်စေတုံ့ပြန်ချက်ထဲမှာကျားကွာခြားချက်များ။ နှင့် လိင်တူဆက်ဆံသူနဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ရွံရှာ၏အာရုံကြောဆားကစ်: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။
3) အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုအသက်အရွယ်နှင့်လိင်-လိုက်ဖက်ကျန်းမာ, Non-စွဲထိန်းချုပ်မှုများ၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေ။
အဆိုပါ Prause လေ့လာမှုအဘယ်သူမျှမထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့တိုင်အောင်, Prause ပုံမှန် EEG ဖတ်သူမ၏ဘာသာရပ်များအဘို့ဖြစ်ရပြီလိုအဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိပါတယ်, သေးသူမရဲ့အလုပ်လိင်စွဲလမ်း၏အယူအဆ unravels သမျှသောစာနယ်ဇင်းကျော်အထိတောင်းဆိုမှုများဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မယုံနိုင်စရာ။
အဆိုပါဦးနှောက်တွင် porn: ဗြိတိန်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်